Hello Nepal News » ‘हल्यान्डका लागि ७५ मिलियनभन्दा बढी बगाउनु व्यर्थ हुनेछ’
‘हल्यान्डका लागि ७५ मिलियनभन्दा बढी बगाउनु व्यर्थ हुनेछ’
स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोना आगामी समर सिजनमा जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्डका युवा गोलकर्ता खेलाडी अर्लिङ हल्यान्ड अनुबन्ध गर्ने कसरतमा लागिरहेको छ । २० वर्षीय नर्वेका गोल मेसिन खेलाडीका लागि डर्टमुन्डले निकै महँगो मूल्य कायम गरेको छ । जर्मन मिडियाका अनुसार डर्टमुन्डले हल्यान्डका लागि १८० मिलियन युरोको रिलिज क्लज तोकेको छ । यसको अर्थ हल्यान्डलाई अनुबन्ध गर्न चाहने क्लबले यही मूल्य तिर्नुपर्छ ।
तर, पछिल्लो समय हल्यान्डका एजेन्ट मिनो राइओला र उनका पिताले बार्सिलोनाको कार्यालय नै पुगेर हल्यान्डको सम्भावित अनुबन्धबारे छलफल गर्दा डर्टमुन्डका लागि सरुवा फीबापत १५० मिलियन युरो रकमको माग राखेको भन्दै रिपोर्ट बाहिरिएका थिए । गत जनवरी सिजनबाट मात्रै युरोपका शीर्ष लिगमा खेल्न थालेका हल्यान्डका लागि १८० मिलियन युरो वा १५० मिलियन युरो मूल्य कतिको उचित हो ? वा, उनले यस मूल्यलाई न्याय गर्न सक्लान् ?
बार्सिलोनाका नयाँ अध्यक्ष जोआन लापोर्टा समरमा ऋण काडेर भए पनि हल्यान्ड भित्र्याउने दौडमा रहेका बेला बार्सिलोनाका लिजेन्ड खेलाडी रिभाल्डोले हल्यान्ड अनुबन्धको विषयमा नयाँ बोर्डलाई सुझाव दिएका छन् । उनले हल्यान्ड यो समयका एक राम्रा खेलाडी भए पनि उनका लागि ठूलो बजेट खर्चन नहुने बताएका छन् । रिभाल्डोले त तोकेरै हल्यान्डका लागि अधिकतम् ७५ मिलियन युरोभन्दा बढी रकम लगानी गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
‘अर्लिङ हल्यान्ड यो समयका एक गोल्डेन ब्वाई हुन् । उनलाई अहिले सबैले मन पराउँछन् । ठूला क्लब उनलाई भित्र्याउन चाहन्छन् । किनभने, उनी युवा छन् र गोल गर्न सिपालु छन् । यो त उनको तथ्यांकले पनि बताउँछ,’ रिभाल्डोले भनेका छन्, ‘तर, यदि बार्सिलोना उनलाई भित्र्याउन गइरहेको छ भने ७५ मिलियनभन्दा बढी रकम उनका लागि खर्चनु सही हुनेछैन । उनले अहिले ठूलो ट्रान्सफरको बोझ बोक्न सक्दैनन् । किनभने, उनी भर्खर सिकिरहेका छन् । र, उनको महँगो सरुवाका लागि अझै दुई–तीन सिजन पर्खिनुपर्छ ।’
रिभाल्डोले बार्सिलोनाले अहिले सानो बजेटबाटै टोलीको पुनर्मिर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘क्लब अहिले आर्थिक चपेटामा छ । यस्तो बेला एक खेलाडीका लागि ठूलो बजेट लगाउनु राम्रो होइन । मलाई लाग्छ, बार्सिलोनाले थोरै बजेटबाट टोली तयार पार्नुपर्छ । किनभने, अहिले नै त्यहाँ धेरै महँगा–महँग खेलाडी छन्,’ रिभाल्डोले भने, ‘एक खेलाडीमाथिको ठूलो लगानीले निश्चितता नदिन पनि सक्छ ।’
रिभाल्डोले हालका प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानले युवा खेलाडीलाई राम्रो गरी प्रयोग गरिरहेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । ‘कोम्यानले प्रतिभाशाली युवा खेलाडीलाई निकै राम्रो स्थान दिइरहेका छन्, यो धेरै राम्रो कुरा हो । अहिले सिनियर टोलीमा भोलिको नयाँ पुस्ता पनि सँगै तयार हुँदैछ । अहिले त्यहाँ ५ जनाले युवा खेलाडी सिनियर टोलीमा छन्, यो धेरै राम्रो पक्ष हो । यसले आफ्नै टोलीमा प्रतिभाशाली खेलाडी तयार पार्न सघाउँछ,’ रिभाल्डोले भने, ‘त्यसैले म भन्छु, बार्सिलोनाले महँगो बजेटमा बाहिरबाट खेलाडी ल्याउनुभन्दा भएका खेलाडीलाई योजना बनाएर प्रयोग गर्नुपर्छ ।’
प्रकाशित मिति २३ चैत्र २०७७, सोमबार २२:०४